Hurumende Yogadziridza Gwaro reMazita eVavhoti
Zvita 15, 2010
Hofisi yamabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar-General, inoti iri kuenderera mberi nehurongwa hwekuvandudza gwaro revavhoti, kana kuti voter’s roll, kuburikidza nekubvisa pagwaro iri vanhu vakafa, kana kunyoresa mazita matsva evanhu vava nekodzero yekuvhota.
Vachitaura kuvatori venhau muHarare neChipiri, mabharani mukuru, VaTobaiwa Mudede, vakazivisa kuti kubva pakasimudzirwa chirongwa ichi muna Nyamavhuvhu, vashandi vekumahofisi avo, avo vari kufamba mumaruwa vachisangana nemadzishe, masabhuku pamwe nevagari, vakwanisa kuunganidza humbowo hwekuti vanhu vanodarika makumi matatu ezviuru vaive mu voters’ roll, vakafa kare.
Gadziridzo yegwaro iri inoitika apo nyika iri kutarisirwa kuita sarudzo gore rinouya. Asi VaMudede vanoti hurongwa hwavo hahuneyi nesarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya, sezvo iri riri basa ravanogara vakaita mazuva ose.
Nyaya yekusamira zvakanaka kwe voters’ roll ndeimwe yenyaya dzanga dzichinetsa musarudzo dzaiitwa munyika, paine kunyunyuta kwevamwe kuti mazita evanhu vakashaya kare kare, achiri kuwanikwa mugwaro remazita evanhu vanovhota. Hatina kukwanisa kubata vekumahofisi amabharani mukuru kuti vatiudze zvimwe zvavakawana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network, ZESN, Amai Rindai Chipfunde-Vava, vanoti vanotambira danho ratorwa nemahofisi ekwaRegistrar-General, asi vanoti dai basa iri raitwa riri mumaoko eZimbabwe Electoral Commission.